कम्मरमा कसिलोसँग बेल्ट बाध्नुहुन्छ ? होसियार ! सन्तान उत्पादन क्षमतामा पार्दछ यस्तो प्रभाव – Online Nepalaja
कम्मरमा कसिलोसँग बेल्ट बाध्नुहुन्छ ? होसियार ! सन्तान उत्पादन क्षमतामा पार्दछ यस्तो प्रभाव
January 31, 2021 94
काठमाडौँ । कार्यालयमा काम गर्नेहरु हुन् वा शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्नेहरु अधिकाशं मानिस पेन्ट सर्टसँग बेल्ट अर्थात पेटी बाध्ने गर्दछन् ।अझ पुरुषहरुमा पेटी बाध्ने बानि हुन्छ । पेटीले पेन्टलाई कम्मरको ठीक ठाउँमा रहन मद्दत पुर्याउँछ भने सर्टलाई समेत पेन्टबाट बाहिर निस्किन दिदैन । तर कतिपय अवस्थामा भने पेटी बाध्ने बानि हानिकार हुनसक्छ ।
अक्सर पेटी बाध्नेहरु कम्मरमा टाइट (कसिलो) पेटी बाध्ने गर्दछन् । यस्तोमा कम्मरको नसा च्यापिनुको साथै अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि उत्पन्न गराउँछ ।
कम्मरमा कसिलो पेटी बाध्दा निम्न समस्या देखा पर्दछन् :
१. गर्भवती महिलाले भुलेर पनि कसिलो बेल्ट लगाउनु हुदैन, अन्यथा गर्भ खेर जान सक्छ ।२. कसिलो पेटी लगाउँदा शरीरमा राम्रोसंग रक्त सञ्चार हुन पाउदैन ।३. कसिलो पेटीको डाम रहदाँ यसले चिलाउने समस्या निम्त्याउने गर्दछ ।
४. लामो समय कसिलो पेटी बाध्दा पेल्भिक क्षेत्रमा दबाब पर्दछ र स्पर्मको संख्या घटाउँछ ।५.कसिलो पेटी बाध्दा कालान्तरमा सन्तान उत्पादन क्षमतामा प्रभाव पर्दछ ।६. लामो समय कसिलो पेटी बाध्दा खाना राम्ररी पच्न पाउँदैन ।
७ .कसिलो पेटी बाध्दा कब्जियतको समस्या हुने गर्दछ ।८. यस्तो बानीले खुट्टाको हड्डि कमजोर पार्दछ ।९. कसिलो पेटी बाध्दा खुट्टा सुन्निने समस्या देखा पर्दछ ।१०. अधिकाशं मानिसमा यस बानिले कम्मर दुख्ने समस्या निम्त्याउँछ ।११. कतिपय अवस्थामा यस्तो बानीले एसिडिटीको समस्या पनि गराउँछ ।
Prevनक्कली भनेर किनेकाे हिराको औंठीले ३० वर्षपछि बनायो करोडपति
Nextमानिसले चिताएको सबै पूरा गरिदिने दक्षिणकाली भगवती मन्दिर ! भेटी स्वरुप ॐ लेखी सबैले सेयर गरौ
कलेज पढ्ने १७ बर्षीय युवतीको भाडाको कोठामा यस्तो रहस्य खुलेपछि
भेटियो साई बाबाको दु’र्लभ तस्विर दर्शन गर्दै ॐ लेखी शे’यर गर्नुहोला मनले सोचेको सबै पुग्नेछ
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस (372)
पूरा हेर्नुहोस मात्र9लाख 99 हजार मा घर बिक्रीमा (325)